Ngwa 6 kachasị mma iji dee ihe na gam akporo | Gam akporosis
Aaron Rivas | | Ngwa gam akporo, Ngwa gam akporo
N’etiti ụbọchị ọrụ na nrụgide, ọ dị mma mgbe niile ịnwe ngwa ọrụ ma ọ bụ ngwa iji na-edetu ngwa ngwa na ngwa ngwa, ebe ọ bụ na ọ bụkarị anyị ichefu ihe ụfọdụ na ọrụ anyị ga-eme n’ụbọchị. Onweghi ihe dika inwe akwukwo idetu oru nile edechaala na nke foduru ka emezie ka hazie ha nke oma dika oru ma obu ebum n’iru.
Inwe akwụkwọ idetu ihe dị mkpa taa, ebe ọ bụ na ha na-enyere anyị aka kesaa ihe aga-eme nke ọma, echefula ọrụ ma hazie onwe anyị. N'otu oge ahụ, a na-ezube ha ịnwe echiche ndị ahụ na-adakwasị anyị na-atụghị anya ya na nke a na-atụghị anya ya, nke mere, n'ụzọ dị otu a, anyị agaghị echefu ha ma emechaa. Ọ bụ ya mere na oge a anyị na-anakọta ngwa 6 kachasị mma iji were ndetu na gam akporo.
N’okpuru anyị etinyela usoro nke ngwa kacha mma 6 ka ịkọwapụta ma detuo ihe na ekwentị gam akporo. Okwesiri ighota, dika anyi na eme, na ndị niile ị ga-ahụ na mkpokọta akwụkwọ a bụ n'efu. Ya mere, ị gaghị akpa ego ọ bụla iji nweta otu ma ọ bụ ha niile. Agbanyeghị, otu ma ọ bụ karịa nwere ike ịnwe sistemụ nkwụnye ego dị n’ime, nke ga-enye ohere ịnweta nnabata ọdịnaya n’ime ha, yana iji nweta atụmatụ dị elu ma nwekwaa ogo. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ dịghị mkpa ịkwụ ụgwọ ọ bụla, ọ bara uru ịmeghachi. Ugbu a ee, ka anyị gakwuru ya.
1 Ihe Odighi Mfe: Ihe edeturu, Agenda, Notability
2 Mfe ndetu
3 Akwụkwọ ndetu - Mara ihe edeturu
4 Edeturu Notepad Agba
5 Akwụkwọ m - Diary, Diary with lock
6 Ihe edeturu
Ihe Odighi Mfe: Ihe edeturu, Agenda, Notability
Ọ bụrụ n'ịchọrọ iso ihe dị mfe iji ederede na ihu enyi enyi, zuru oke, haziri ahazi ma, n'otu oge ahụ, dị mfe, Ihe Odighi Mfe: Ihe edeturu, Agenda, Notability bu ezigbo ngwa, na ọ bụ ya mere na anyị etinyela ya na mbụ na nchịkọta mkpokọta a, yana maka ịbụ otu n'ime ndị kachasị ewu ewu, ibudatara na Playlọ Ahịa Play ma jiri ya na gam akporo.
Jiri ngwa a dee ihe ma dee ihe di mfe karia ka ị ghara ichefu ihe ikwesiri ime ma nwekwaa njikota ihe ndi ozo na ihe nile ichoro ime kwa ubochi. Dee echiche ngwa ngwa na ngwa a site na ndetu na nke kachasị mma bụ na ọ na-enye gị ohere itinye foto ma ọ bụ ọdịyo na ndetu, ya mere, ha na-akpa ike ma na-atọ ụtọ karịa ngwa ndị ọzọ dị mkpa. Họrọ ndabere nke mmasị gị ma chekwaa ndetu gị na ndepụta ndetu na-enweghị nnukwu nsogbu.
Nhazi dị mfe na usoro a haziri ahazi maka nkọwapụta ngwa ngwa
Rịba ama pinning / anchoring ọrụ maka mmasị echiche nke kasị mkpa na kasị elu mkpa
Nwere ike ịgbakwunye foto, onyonyo, audios na egwu na ndetu, iji mee ka ndetu ahụ bụrụ ihe na-atọ ọchị na nkeonwe
Ma ọkwa na ohere ịhazi na ịhazigharị ha iji mepụta ncheta ga - egbochi gị ichezọ ihe edere na ngwa ahụ
Adaba interface na ụbọchị ịtụ otú i nwere ike ngwa ngwa chọta ndetu n'oge ọ bụla
Enwere ọtụtụ edemede iji nyere gị aka ịhazi ndetu gị ma chọta ha n'etiti onwe ha. I nwekwara ike ịdee ihe edeturu
Akpaka ịzọpụta mgbe na-eme a dee mgbe ide na ozugbo
Can nwere ike ịkekọrịta ndetu mfe na mfe
Ihe ndetu - ndetu dị mfe, ndetu dị mma
Mgbe ụfọdụ anyị achọghị ngwa eji arụ ọrụ buru ibu, n'agbanyeghị na ha anaghị egbochi ọmarịcha ahụmịhe onye ọrụ. Mgbe ụfọdụ ngwa dị mfe ma dịkwa mfe iji dị ka Mfe Ndetu bụ naanị ihe anyị chọrọ, dịka ọ dị ruo n'ókè ma na-enye nchekwa nke ndetu na ndetu n'ụzọ a haziri ahazi, ebe ị na-anọgide na ngwa ọrụ dị fechaa nke na-eme ihe ọ kwere na nkwa.
Edezi ndetu na ndetu na ngwá ọrụ a bụ nnọọ mfe, yana nhazi nke interface, nke na-eme ka ojiji ya. Iji ngwa a, anyị nwere ike ide listi ịzụ ahịa, ncheta, ndetu, echiche dị mkpirikpi, ederede ogologo na ọrụ anyị chọrọ ime ụbọchị niile ma ọ bụ mgbe e mesịrị, n'etiti ihe ndị ọzọ.
Ọ na-enye anyị ohere ịhazi ndetu nke anyị na-echekwa n'ime ya site na akwụkwọ ndetu, nke na-eme ka ọchụchọ dị mfe. N'otu oge ahụ, Ọ nwere a nnyapade dee wijetị na anyị nwere ike idowe n'ebe ọ bụla na n'ụlọ anyị na ihuenyo, ka ị ghara ichefu ndị kacha mkpa. Anyị nwekwara ike ịme akwụkwọ ndabere na nchekwa dị na mpụga, yana ịkekọrịta ndetu na ndetu site na SMS, email ma ọ bụ Twitter.
N'aka nke ọzọ, ọ bụ otu n'ime ihe ederede kachasị ederede maka gam akporo na Storelọ Ahịa Play. Ibu ya bụ ihe na-erughị 5 MB, mana nke a anaghị egbochi ya ịnweta ọnọdụ dị ùgwù na ụlọ ahịa Google ma nweta akara nke kpakpando 4.6, nke dabere na ihe karịrị 1 nde nbudata na ihe dị ka puku 20 mma.
Akwụkwọ ndetu - Mara ihe edeturu
Ngwa ọzọ dị ukwuu iji dee ihe na ama gam akporo gị bụ, n'enweghị obi abụọ ọ bụla, Akwụkwọ ndetu - Were Nkọwa, ngwa dị fechaa nke nwere ọtụtụ atụmatụ na ọrụ na-eme ka ụbọchị gị dị mfe ma hazie karịa, nyere nhọrọ niile ị nwere. onyinye.
Na ngwa a inwere ike idetu ihe na ederede, onyonyo, ndetu nlere na odiyo. Also nwekwara ohere ị gbakwunye ihe dị iche iche ma gbanwee ya mgbe ọ bụla ịchọrọ. N'otu oge ahụ, ọ na-enye gị ohere idekọ ihe ederede olu, nke bara ezigbo uru, ma lelee ma ọ bụ tinye akwụkwọ Microsoft, PDF na faịlụ ndị ọzọ.
N'aka nke ọzọ, ọ na-eme ka o kwe omume ịchekwa ndetu na ndetu na akwụkwọ ndetu, nke na-eme ka ihe niile hazie ma dị mfe. Ọ na-enye ohere ịmepụta mkpokọta kaadị ndetu site na ijikọ ndetu, ịtụgharị ederede n'ime akwụkwọ ndetu, ịkwaga ma ọ bụ ị copomi ihe edeturu n'etiti akwụkwọ ndetu, ịchọ n'ime akwụkwọ ndetu ma ọ bụ na akwụkwọ ndetu, jiri mkpọchi mkpọchi na-enweghị nchekasị. jiri akara mkpisi aka iji nweta ha (naanị ma ọ bụrụ na ekwentị nwere onye na - agụ ya).
Akwụkwọ ndetu - Were ihe edeturu
Edeturu Notepad Agba
Maka ndị hụrụ ọhụụ na-enweghị atụ, ColorNote bụ otu n'ime ihe kacha mma ederede na-ewere ngwa na onlọ Ahịa Play, maka inwe interface dị ọcha na ọrụ ndị dị mkpa.
Isi njirimara nke ngwa a bu ihe ndia:
Can nwere ike hazie ndetu dị iche iche na agba
Usoro nhazi dị mfe site na bọọdụ
Nchetara na ọkwa na ọkwa ọkwa: oge ​​mkpuchi, ụbọchị niile, kpoo (kalenda ọnwa)
Ndenye search ọrụ maka ndetu na memos
Okwuntughe maka memos na olu na nchekwa na nzuzo. Edere ndetu ahụ n'okpuru ọkọlọtọ AES, nke bụ otu nke ụlọ akụ na-echekwa data ndị ahịa.
Detuo na listi ndenye na Ihe aga-eme
Ohere ịmekọrịta ihe edeturu na ndetu n'etiti ekwentị na mbadamba
Ndabere akwụkwọ nke ndetu echekwara na ama microSD kaadị
Notepad dakọtara na ColorDict Add-On
Kekọrịta ederede site na SMS, email, twitter
Nnyapade ndetu dị ka wijetị na ike ga-enịm ke ekwentị n'ụlọ ihuenyo
Akwụkwọ m - Diary, Diary with lock
Akwụkwọ edetu na-abụ ezigbo akụ iji mee ndetu na nkọwa dị mkpa, ka ị ghara ichefu isiokwu, ọrụ, echiche, ebumnuche na ịhazi ihe niile anyị nwere maka ụbọchị. Ngwa a na - arụ ọrụ otu, mana anyị nwekwara ike ịnye gị iji ederede na ndetu. Ihe bụ ihe ọzọ, ọ dị oke nchebe, nzuzo bụ otu n'ime ike ya, dị ka enwere ike ịmepụta koodu iji nwee ike ịbanye ndenye ederede.
N'aka nke ọzọ, ngwa a na-akwado iji mkpịsị aka n'aka onye na-agụ mkpanaka ka ị kpọghee ohere. O nokwa iwhe-dụ-ẹji; Nwere ike ịhọrọ agba nke ndetu, yana ndabere nke edetu, ma ọ bụ họrọ nke gbara ọchịchịrị, nke na-eme ka ngwa ahụ ghara iju anya n'abalị na ọkụ na agba agba. I nwekwara ike mekọrịta nzuzo ma ọ bụ ụbọchị kwa ụbọchị na igwe ojii site na Google Drive, ka ị nwee ike ịnweta ha oge niile. Na mgbakwunye na nke a, enwere mkpado dị iche iche ị nwere ike iji chọpụta nkọwa gị, n'etiti ihe ndị ọzọ.
Ngwa a a ma ama na ọ nwere ihe karịrị nde 10 na 4.8lọ Ahịa Play na akara ngosi XNUMX na ụlọ ahịa ahụ. Ọ bara uru ịnwale.
Developer: Mmiri ara ehi App & Notes & Audio Editor & Voice Recorder
Iji mechaa mkpokọta nchịkọta nke ngwa kachasị mma iji mee ndetu ma mepụta ihe edeturu, anyị nwere ederede Agba, ngwa ọzọ magburu onwe ya nke na-emeju ọrụ a. Nke a nwekwara a dị mfe ma kwụ ọtọ interface, na-ekwe nkwa ndị na-eme ka nzukọ kwa ụbọchị site na nkọwa na-arụ ọrụ nke ọma.
Offọdụ n'ime atụmatụ ya gụnyere nhọpụta ederede maka nhazi nke ndetu na agba dị iche iche maka ha. Ọ dị naanị ihe dịka 8 MB, ya mere, ọ dịkwa ọkụ.
Developer: Kenzap Pte Ltd.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ngwa 6 kachasị mma iji detuo ihe na gam akporo
Top 10 alternatives ka Spotify na gam akporo